Home » Caafimaadka » Shaaha iyo Caafimaadka
Cilmibaaris lagu sameeyay shaaha ayaa natiijadii ka soo baxday la sheegay in haddii qofku uu dhawr koob oo shaah uu caabo maalintii uu ka ilaaliyo qaadista cudur. Aqoonyahanada baaris cilmiyeedka sameeyey oo ka tirsan jaamacadaha Havard iyo Brigham iyo Isbitaalka haweenka ee Boston ayaa sheegaysa in coffee cabistu aanay saamayn la mid ah lahayn. Culimada sayniska waxay ogaadeen in walax amino acid ah oo loo yaqaan L-thaniin oo shaaha ku jirtaa ay xoojiso awooda ay unugyada jirka ee loo yaqaan T cells kula dagaalamaan jeermiga, unugyadaas waa kuwa safka hore ee difaaca jirku isaga celliyo weerarada bacteria iyo viruska.
Haddaba saynisyahanada tijaabadaan sameeyey waxay la kaashadeen dad aan badneyn oo iskood uga qayb galay cilmi-baaristan, waxay qof kasta siin jireen qiyaastii ilaa nus liter shaah ah maalin walba mar.
Waxaa la siinayey shaah caana leh, marna isagoon caano lahayn, mar Shaah sokor leh, marna Shaah aan sokor ahayn, markii afar toddobaad sidaas lagu waday ayey cilmi-baarayaashii heleen oo ay u soo baxday in jirkoodii uu 5 jeer ka difaac weynaaday sidii uu ahaa tijaabada ka hor oo uu haatan si wanaagsan isaga difaaci karo bacteriyada marka loo eego sidii ahaayeen tijaabada ka hor.
Waxaa iyaguna jiray koox kale oo dhowr qof ka koban oo la eegayey sida difaca jirkooda wax isaga badali karaan oo la siin jiray Coffee ama qaxwe.
Markii tijaabadii dhamaatay waxaa la is bar bar dhigay iyaga iyo kuwii shaaha, waxaana la ogaaday in kuwii shaaha la siin jiray uu jirkoodu ka difaac wanaagsan yahay kuwi Coffee-ga, marka la eego habka difaaca jirka uu Shaahu wax uga tari karo.
Khubaradu waxay sheegayaan in natiijadani ay tahay mid macne weyn leh, oo loo baahan yahay in baaritaano kale la sameeyo si loo xaqiijiyo in dhowr koob oo shaah ah oo maalintii la cabaa ay wax ka tareyso sidii aanu uga maarmi lahayn dhakhtarka.